induction kuomesa kupisa | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
induction hardening heat
induction kuomesa simbi yakabata ruoko matampu
induction kuomesa simbi yakabata ruoko matampu Chinangwa Induction kuomesa akasiyana saizi magumo emasaoko ekumaka matampu. Iyo nzvimbo ichaomeswa iri 3/4 ”(19mm) kumusoro iyo shank. Chinyorwa: Matampu esimbi 1/4 "(6.3mm), 3/8" (9.5mm), 1/2 "(12.7mm) uye 5/8" (15.8mm) mativi Kupisa: 1550 ºF (843 ºC) Frequency 99 kHz Midziyo • DW-HF-45kW kupisa induction sisitimu, yakagadzirirwa… Read more
Categories Technologies Tags Tenga MUKUSIMA muchina, kuomesa, matampu anoomesa, Pakuomesa, Mumaitiro ekuomesa, MUMWE nzvimbo yakaoma, MUMATURIKI ekuomesa, induction hardening, Induction kuomesa hita, induction hardening heat, induction hardening machine, induction kuomesa simbi, induction kuomesa maturusi
Chii chinonzi induction kuoma?
Induction kuoma inoshandisa kupisa kupisa uye kunonoka kunononoka (kuvhara) kuwedzera dambudziko nekugara kwesimbi.Induction Kutya haisi--kutaridzirana inokurumidza kubudisa zvakanyanya, nzvimbo uye inochengetedza kupisa. Nokugadziriswa, chete chikamu chekuomeswa chinopisa. Kugadziridza hurongwa hwemagadzirirwo akadai sekushisa maitiro, frequencies uye coil nekudzima kugadzirwa zvinoguma mumigumisiro yakanakisisa.
Induction kuoma kunowedzera kuputika. Iyo inokurumidza zvakanyanya uye inodzokorora nzira inobatanidza nyore nyore mumiganhu yekugadzira. Nekunyorerwa iyo inowanzobata kurapa pabasa rimwe nerimwe. Izvi zvinogonesa basa rimwe nerimwe rakasiyana rakaomeswa kune zvarinoreva zvakananga. Iyo yakagadziriswa maitiro emagetsi ega ega ega inogona kuchengetwa pamaseva ako. Kunyunyisa kuomesa kwakachena, kwakachengeteka uye kazhinji kune zvishoma zvishoma. Uye nokuti bedzi chikamu chechikamu chinenge chichiomeswa chinopisa, chinonyanya simba-chinoshanda.
Induction Kutya inoshandiswa kuoma zvakawanda zvikamu. Pano pane mashomanana acho: magasi, mabheji, camshafts, motokari shafts, shafts output, torsion bars, rocker arms, maCV joints, tulips, valves, rock drills, rings ringwing, inner and outer races.
Categories FAQ Tags kuomesa nzira, kuoma pamusoro, induction hardening, kudzivirirwa kuomesera zvidzidzo, induction hardening heat, induction hardening principle